कोरोना भाइरसः यौ-न- सम्बन्ध स्थापित गर्न सुरक्षित छ ? थाहा पाईराख्नुस – Halkhabar kura
२९ चैत्र २०७६, शनिबार १०:२०
कोरोना भाइरसः यौ-न- सम्बन्ध स्थापित गर्न सुरक्षित छ ? थाहा पाईराख्नुस
एजेन्सी । यदि मैले यौ-न-स-म्बन्ध स्थापित गरेँ भने मलाई कोरोना लाग्ला ? तपाईंको मनमा यो कुरा धेरै पटक आएको हुनसक्छ तर लज्जा वा डरका कारण सायद सोध्न सक्नुभएको छैन । तथ्यलाई भ्र-म-बाट अलग गर्नका लागि बीबीसीका संवाददाताले यस्ता प्रश्नलाई स्वास्थ्यविज्ञ सामू राखेका छन् ।
डाक्टर एलेक्स जर्ज एएण्डई डाक्टर हुन् र लभ आइल्याण्डका पूर्व कन्सलटेन्ट पनि हुन् । एलेक्स फक्स एक से-क्स- जर्नलिस्ट हुन् र बीबीसी रेडियोकी कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हुन् । साथै उनी द मोर्डन म्यान पोडकास्टकी सह–प्रस्तोता पनि हुन् । यी दुई विज्ञमार्फत् यौ-न-स-म्बन्ध र कोरोना भाइरससँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणमा यौ-न-स-म्बन्ध राख्नु सुरक्षित छ ?
डा. एलेक्सः यदि तपाईं सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र कसैसँग बसिरहनुभएको छ र एकै ठाउँमा बसिरहनुभएको छ भने यसले तपाईंको स्थितीमा परिवर्तन हुनु हुँदैन । यद्यपि, तपाईंमध्ये कोही एकमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छ भने दुरी स्थापित गर्नुपर्छ र आफ्नै घरमा आइसोलेशनमा बस्नुपर्छ । एक आदर्श दुनियाँमा प्रत्येक व्यक्ति एक अर्कासँग एक–दुई मिटरको दुरीमा बस्नुपर्छ । आफ्नै घरभित्रै नै किन नहोस् । तर हामीलाई थाहा छ कि यस्तो गर्न सजिलो छैन ।
एलिक्स फक्सः यदि तपाईंहरुमध्ये एकमा कोरोना भाइरसको हल्का लक्षण देखिएको छ भने तपाईंले पार्टनरसँग टाढै बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।
नयाँ व्यक्तिसँग यौ-न-स-म्बन्ध स्थापित गर्न सुरक्षित छ ? डा. एलेक्सः म निश्चित रुपमा यस्तो बेला नयाँ यौ-न- साथी बनाउन सल्लाह दिन्नँ । यसमा तपाईंलाई कोरोना भाइरसको सं-क्र-म-ण हुने खतरा बढी छ ।
एलिक्सः यो बिर्सनु हुन्नँ कि कतिपय कोरोना भाइरस सं-क्र-मि-त-मा केही लक्षण नै देखिँदैन । तपाईंले आफूलाई एकदम फिट महसुस गरिरहनु भएको छ भने पनि तपाईंले यसको सं-क्र-म-ण दोस्रो व्यक्तिमा सार्नुभएको हुनसक्छ । नजिकको सम्पर्क र चुम्बन गर्दा यो भाइरस थप व्यक्तिमा पुग्न सक्छ ।
मैले हालै कसैलाई चुम्बन गरेको छु, उनलाई अब कोरोनाको लक्षण देखिएको छ । मैले अब के गर्नुपर्छ ? . एलेक्सः यदि तपाईंले कसैलाई चुम्बन गर्नुभएको छ वा तपाईं यस्तो व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको छ जसमा अब कोरोनाको लक्षण देखिएको छ भने तपाईंले आफूलाई आइसोलेट गर्नुपर्छ । आफ्नो लक्षणमाथि निगरानी राख्नुहोस् । यदि तपाईंमा पनि लक्षण देखिए सतर्क हुनुहोस् । यदि लक्षण गम्भीर भए तपाईंलाई स्वास्थ्य सहयोगको आवश्यकता छ ।
एलिक्सः हामी एक–अर्काका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ । साथै हामीले हाम्रो सम्बन्धमा आफ्नो लागि पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यदि तपाईंमा लक्षण देखिएको छ र तपाईंले कसैलाई चुम्बन गर्नुभएको छ भने आफ्नो स्थितीबारे तपाईंले उनलाई जानकारी दिनुपर्छ । तपाईंले चुम्बन गरेको व्यक्तिमा अब लक्षण देखिएको छ भने आफूलाई सेल्फ–आइसोलेशनमा राख्नुहोस् ।
कोरोना भाइरस अघि म पार्टनरसँग कण्डम प्रयोग गर्दिनथेँ । के अब मैले यसको प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्छ ? एलिक्सः यसको जवाफ होः तपाईंले अहिलेसम्म कण्डम किन प्रयोग गरिरहनुभएको थिएन ?
यदि तपाईंहरु गर्भनिरोधका लागि अन्य तरिका प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने त ठिक छ तर तपाईंले ‘पुल आउट’ जस्तो तरिकामाथि विश्वास गरेर कण्डम प्रयोग गरिरहनुभएको छैन भने तपाईंले कण्डम प्रयोग गर्न अत्यधिक आवश्यक छ ।
कसैको यौ-ना-ङ्ग- छुँदा पनि कोरोना हुनसक्छ ? डा. एलेक्सः यदि तपाईंले कसैको यौ-ना-ङ्ग- छोइरहनु भएको छ भने तपाईंहरु चुम्बन पनि गरिरहनुभएको हुनसक्ने सम्भावना छ । र हामीलाई थाहा छ कि यो भाइरस –यालबाट पनि फैलन्छ । यो जोखिमयुक्त छ । यस्तोमा जुन पार्टनरसँग तपाईं बसिरहनुभएको छैन उनीसँग तपाईंले सम्पर्क राख्नुहुँदैन ।
अहिलेको स्थितीमा आफ्नो सम्बन्ध कसरी कायम राख्न सकिन्छ रु म अब सिंगल बस्दिनँ ।
एलिक्सः यो महामारीले मानिसहरुलाई उत्कृष्ट यौन जीवन के हो भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ । मैले सुनेकी छु कि मानिसहरु एकअर्कालाई रोमान्टिक कहानी लेखिरहेका छन् । जो मानिसहरु आइसोलेशनमा छन् र छुट्टा छुट्टै बसिरहेका छन् उनीहरुले यो दुरीको फाइदा पनि उठाइरहेका छन् । केही मानिसहरु निकै सृजनशीलसमेत भएका छन् ।
यदि तपाईं र तपाईंको पार्टनर एकै घरमा आइसोलेशनमा बसिरहनुभएको छ भने यसतबेला तपाईंले आफ्नो पार्टनरबारे धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ । एक–अर्कालाई मनपर्ने मननपर्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
यदि मलाई एचआइभी छ भने मलाई कोरोनाको कति ख-त-रा- छ ? एलिक्सः टेरेन्स हिगिन्स ट्रस्टका डा. माइकल ब्रेन्डीले केही महत्वपूण सल्लाह दिएका छन् । यदि तपाईं एचआइभीका लागि औषधी खाइरहनुभएको छ र यदि तपाईंको सीडी४ काउन्ट राम्रो छ भने तपाईंलाई कमजोर प्रतिरोधी प्रणाली छ भन्न मिल्दैन ।
यसको अर्थ यो हो कि तपाईंलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने थप आशंका भने छैन । यस्तोमा यदि तपाईं एचआइभी पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने औषधी खाइरहनुहोस् । सेलेस्टिना ओलुलोडे/बीबीसी
Previous बिकिनी फोटोमा मजाक बनिन् ‘गुलाबो’ रुविना, फर्काइन यस्तो कडा जवाफ
Next कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा एकै दिन २१ सय ८ जनाको मृत्यु